Banyere Anyị - NIutech Environment Co., Ltd
Industrial n'ihu Waste Plastic Pyrolysis Production Line
Taia Pyrolysis Plant
Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis Production Line
Industrial n'ihu Oil sludge Pyrolysis Production Line
Industrial n'ihu Waste Rubber Pyrolysis Production Line
Niutech Environment Technology Corporation, nke meriri Chinese National Science & Technology Ọganihu Award, bụ drafter of Chinese National Standard; The ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 60x nchọpụta Kemịkalụ ikike ụwa na ọtụtụ n'okpuru ngwa.
Niutech bụ na-eduga enterprise na pụrụ iche na polima wastes (scrap taya, n'efu plastik, mmanụ sludge wdg) na-aga n'ihu Pyrolysis technology R & D, elu àgwà ngwá rụpụta nakwa dị ka ngwaahịa ahịa. The dum Pyrolysis osisi a na-arụ ọrụ n'okpuru mma na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi na ọnọdụ na nnabata na EU EEA na US EPA ụkpụrụ.
Pụtara ìhè na ọkachamara oru otu, Niutech unremittingly mma ya technology ngwá ruo afọ 30, iji nye kacha mma na mbara ngwọta ahịa. Niutech aga n'ihu Pyrolysis osisi e ọma arụnyere na na na-ere ere ejikwara na Europe, Asia na America, na nweela akụ na ụba, na-elekọta mmadụ na gburugburu ebe obibi uru n'ihi na ahịa.
· The naanị enterprise na Pyrolysis ụlọ ọrụ enweta nkwanye mba China Science and Technology Ọganihu Award
· Jide kasị isi mepụtara na Pyrolysis ụlọ ọrụ
· Dafter nke mba ụkpụrụ
· China Waste Taia Pyrolysis Equipment R & D Center
· Jiri n'ime polima n'efu Pyrolysis for30 yrs
· N'ezie na-aghọta na ulo oru-aga n'ihu ime
Ebee Ka n'efu Taia N'ikpeazụ Nweta?